Indlela Yokupela iLuneburg Ithetha Ntoni Isichazi-magama Esithetha-Indlela Yokupela. ulwazi
Uyibhala njani iLuneburg
ILuneburg Upelo oluchanekileyo
Ngokukodwa abantu abancinci abazi ukuba upelo oluchanekileyo lwamagama amaninzi okwangoku. Nokuba abahlohli bababonisa into engalunganga abayenzayo okanye bazama ukuyilungisa, izinto ezigqithileyo kwezobuchwephesha kunye nokusingqongileyo abazivezileyo zibenza balibale oko bakufundileyo ngexeshana elifutshane, ke ukuphindaphinda rhoqo kunye nokuqinisa oko bakufundileyo kubalulekile.
Enye yeendlela ezifanelekileyo zonxibelelwano phakathi kwabantu kukubhala. Yenye yeendlela ezilungileyo zonxibelelwano kunye nonyango, zombini ukuxelela abanye into kunye nokubhala ukuzibonisa. Kodwa enye yezona zinto zibalulekileyo ngelixa ubhala kukuba iyaqondakala kwaye ibhetyebhetye.
Ukuze ube nakho ukuwazi kakuhle amagama, kufuneka ube nolwazi malunga nendlela amagama abhalwa ngayo. Unokuyixabisa loo nto, makungasathethwa ke kwimigaqo yopelo, intsingiselo yesivakalisi inokutshintsha ngokupheleleyo ngenguqu yekoma kwisivakalisi. Ngesi sizathu, kufuneka silandele imigaqo yopelo ngokusondeleyo kwaye sikhathalele ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo. Wonke umntu kufuneka abonise inkathalo enkulu ukuze ulwimi lwethu lukhule kwaye luphile. Ixesha lethu elidlulileyo, imbali yethu kunye nokudlulileyo kulwimi lwethu Kubaluleke kakhulu ukubhala amagama ngokuchanekileyo nokuthobela imigaqo.
Ithetha ntoni iLuneburg?
Uyibhala njani iLuneburg?
Isikhokelo soPelo seLuneburg
Umgca wecandelo lamanzi
Ukuhamba kwithala leencwadi